Ukwandisa Ukudla Ngokufuya Onogwaja
Ukufuya onogwaja kungaba yimpendulo yezidingo zokuvikeleka kokudla ezindaweni zasemaphandleni nasezindaweni zasemadolobheni ase-Afrika lapho kunabantu abaningi abangasebenzi nabangenakudla. Imiphakathi ehlukumezayo ingafundiswa ukukhiqizwa kokudla okunomsoco okusekelwe imvula ekuvuneni, ukutshala imifino nokuba nonogwaja ukunikeza amaprotheni adingekayo empilweni enhle.
Imiphakathi eminingi yasemaphandleni ineziqhingi zabantu abadala kanye nezingane. Izinkomo, izimbuzi nezimvu akulula ukuba zifuywe futhi izinkukhu ngeke zisebenze njengoba zidinga okusanhlamvu, ukudliwa ngabantu.
Izinzuzo zokulima kogwaja zivame ukwanda: onogwaja banamaprotheni amaningi kuna konke ukudla okufuyiwe ngakho-ke inani elincane lenyama lihamba kakhulu ekunikezeni ukudla.
Kudinga indawo encane kakhulu kunezinye izilwane ezikhiqiza inyama futhi kulula ukubhekana nazo. Bangadla kusuka engadini yemifino bese bedla izinsalela ezifana nesinkwa esidala kanye nommbila wokudla.
Noma kunjalo, kubalulekile ukuthi imiphakathi ithole ukuqeqeshwa. Onogwaja kufanele bagcinwe emakhejini, ngakho-ke, uma enganakiwe, engase efe ukufa okutetemayo nokwesabekayo.
Ukuqala, uzodinga amanzi, ingadi yemifino kanye nabaphathi. Amanzi emvula kufanele aqoqwe ngokusebenzisa umsele emgqonyeni noma amathanki amanzi. Amanzi avuniwe asetshenziselwa ukuchelela izingadi zemifino okufanele zikhiqize unyaka wonke. Tshala Imifino kanye namakhambi ukuze umkhiqizo uqhubeke ungami.
Ama-karoti nesipinashi zondla kakhulu - iziqongo nezitshalo ziya kunogwaja, kodwa futhi nekholifulawa, iklabishi kanye ne-beetroot zingadliwa. Uphasli iyindlabo enhle kakhulu futhi isebenza njengomuthi wokuqinisa umzimba njalo amajikijolo asendle angumuthi wokwelapha obalulekile futhi imbabazane yenza ifolishi elihle kakhulu. Ifolishi ingasuswa etshanini lwasendle futhi kubalulekile kule ndlela yokudla.
Umquba ovela kunogwaja uphindela emuva emgqonyeni wesivundisi noma ngqo kwimifino njengomanyolo omuhle kakhulu. Inzalo yabanogwaja efunzwe ngale ndlela ingasetshenziselwa ukondla umndeni, ukukhishelwa eminye imikhiqizo noma ukuthengiswa njengezitshalo zokuzalanisa zabalimi abasha abangaba khona - nalabo abaqonda kahle.
Izikhumba zoboya ezonogwaja abahlatshiwe zingahle zishukwe ngesandla noma aqoqwe futhi zishukwe ngomshini. Lokhu kuzoya ngekhwalithi yoboya. Ikhwalithi ephezulu kuphela yoboya kufanele ihanjiswe ngokwezomnotho njengoba ingabiza.
Izingubo eziningi zendabuko zidinga uboya, ngakho-ke unogwaja onemibala efana neNew Zealand Reds engasetshenziswa kahle ukukhanda izinwele, njalo njalo.
Uboya bungenziwa ihlibhisi, iziphuku noma izigqoko kanye nezinyawo zangaphambili zingenziwa ngamacici kuthengiswe ekuhwebeni kwezivakashi. Ngaphandle kokuhlinzisa inyama, ukusebenza kwezikhumba zonogwaja kungenza imisebenzi nemali engenayo eyengeziwe emndenini.